Ọnwụ nke otu sapiens gwara onye Neanderthal, nke Millás dere
Ọ bụghị ihe niile ga-abụ ihe nri nri kpuru ìsì na ndụ. N'ihi na na maxim na-achị ihe niile, na premise na-egosi ịdị adị nke ihe naanị dabeere na ha na-emegide uru, ndụ na ọnwụ na-eme ka ndị dị mkpa kpuchie n'etiti onye ókè anyị na-aga.
Ihe kpatara ya enweghịkwa maka onye ọ bụla chepụtara atụmatụ ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi Ọ bụghị ebe a. M pụtara onye kwuru na ihe ya ga-abụ na-etinye ndụ azụ. Na-atụ aro ka a mụọ n'ọgba ọnwụ ịnwụ na njedebe nke orgasm ...
N'agbanyeghị ọhụụ nke onye ọ bụla nwere, enigmas nke ndụ na ọnwụ na-erute akụkụ ọhụrụ na bayoloji nke na-emechi nkeji nkeji a ka "Ndụ gwara sapiens na Neanderthal" gara aga, site na. Miles na Arsuaga. N'ihi na ihe na-enweghị ezi uche na-apụta mgbe niile ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ efu maka ebumnuche na echiche.
"Ọ ga-amasị anyị ịchọpụta na ụdị ọ bụla nwere elekere ndu n'ime mkpụrụ ndụ ya, n'ihi na, ọ bụrụ na elekere ahụ dị adị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọta ya, ikekwe anyị nwere ike ịkwụsị ya wee ghọọ ebighị ebi", Arsuaga jụrụ Millás n'akwụkwọ a na ebe sayensị na-ejikọta akwụkwọ. Ọkà mmụta ihe ochie na-ekpughere onye edemede ahụ akụkụ ndị dị mkpa nke ịdị adị anyị, ma na-atụle ndụmọdụ nke ibufe ọhụụ ndụ ya dị ize ndụ nye Millás na-eri nri bụ onye chọpụtara na ime agadi bụ obodo ebe ọ ka na-adị ya ka onye mba ọzọ.
Mgbe pụrụ iche n'ikuku nke Ndụ nke otu sapiens kwuru na Neanderthal, Akwụkwọ akụkọ Spanish kacha mara mma na-agbakwa onye na-agụ ya egwu ọzọ site n'ịkọ isiokwu ndị dị ka ọnwụ na ebighi ebi, ogologo ndụ, ọrịa, ịka nká, nhọrọ okike, atụmatụ ọnwụ na ịlanarị.
Ihe ọchị, bayoloji, ọdịdị, ndụ, ọtụtụ ndụ ... na ihe odide abụọ na-adọrọ adọrọ, Sapiens na Neanderthals, bụ ndị na-eju anyị anya na ibe ọ bụla na echiche ha dị nkọ banyere otú evolushọn si mesoo anyị dị ka ụdị. Na kwa dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ị nwere ike ịzụta akwụkwọ ahụ "Ọnwụ nke otu sapiens kwuru na Neanderthal", nke Juan José Millás na Juan Luis Arsuaga, ebe a:
Tags Juan Jose Millás, Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Akwụkwọ sayensị